Wasaarad Caafimaad iyo mid Waxbarasho waa loo baahan yahay Federaale. |
Wasaarad Caafimaad iyo mid Waxbarasho waa loo baahan yahay Federaale.
Dowladda haatan Soomaaliya ee ay hogaanka u hayaan Madaxweyne Xasan iyo Raysalwasaare Saacid waxay hoos u dhigtay himiladii shacabka Soomaaliyeed u qabeen yagleeli deeda .Sababta igu kaliftay inaan qoraalkan kooban ka qoro dowladda hada jirta waxa weeye markii dolwaddu dayacday laba arimood oo muhiim u ah ummada Soomaaliyeed guud ahaan oo kala ah waxbarashada iyo caafimaadka.
Labadan wasaaradood ma isku biiri karaan mana hoos tegi karaan wasaarado kale, mana dhici karto in la yiraahdo howlaha caafimaadka iyo waxbarashada waxaa ku filan xafiis qura ama agaasime guud oo ka tirsan wasaarad balaaran sida tan hada laga dhawaajiyey ee wasaarada arimaha bulshada.
Caalamka dhamaantiis wasaaradaha waxbarshada iyo caafimaadka waxay ka mid yihiin wasaaradaha si isku mid ah loo tixgeliyo wadan kastana ku bixiyo dadaal iyo kharash badan sidii labadaas wasaaradood loo hormarin lahaa. Tusaale dalka Ingiriiska wasaarada waxbarashada sanadkii waxaa dakhligeedu yahay 600 oo bilyan oo lacagta Ingiriiska ah oo ka badan ilaa 800 oo bilyan oo doolarka Maraykanka ah kan wasaarada caafimaadkana waa dakhli intaa ka badan oo sanadwalba la sii kordhiyo.
Madaxweynaha wuxuu cuskaday dhaqaale xumo jirta awgeed in wasaaradaha la yareeyo, waa gar in dhaqaale xumo jirto balse maxaa keenay in wasaaradaha muhiimkaa meesha laga saaro meesha wasaarado kale oo waxtarkooda yaryahay meesha lagu soo daray, tan waxay muujinaysaa sida dowladani aysan u aqoon waxyaalaha ahmiyada u leh ummadda horumarkeeda iyo jiritaankeeda.
Madaxtooyada meel aan ka fogeyn 1KM ayaa dadweynihii Soomaaliyeed ula ildaran yihiin cuduro si fudud loo daweyn karo lagana hortegi karo sida cudurka duumada, shuban biyood, hargabka xun iwm. Dhinaca waxbarashada sidoo kale Villa Soomaaliya horteeda ayaa ciyaalkii Soomaaliyeed oo ah mustaqbalka dalka iyo dadka ay taagtaagan yihiin iyaga oo aan haysan waxbarasho iyo caafimaad toona. Meelaha ka fog Villa Soomaaliya iyo magaalada Xamar maxaa ka malaynaysaa xaaladu sida ay tahay. Sidee marka baahida intaa leeg oo jirta dowlad rag isku sheegaya inay wax yaqaaniin, cilmi leeyihiin, kasoo shaqeeyeen arimaha bulshada ay u dayici karaan wasaaradaha ay tahay inay daba qabtaan ummadda Soomaaliyeed oo mudada dheer dagaalka sokeeye ku jirtay.
Waxaa igu maqaal ah in Raysal wasaaraha uu yiri waxbarashada iyo caafimaadka waxay u bateen adeegyo si gaar ah loo leeyahay, oo hadee xaguu ku arkay caafimaad iyo waxbarasho tayo leh oo dalka oo dhan gaarsiisan oo si gaar ah loo leeyahay mida kale wax si gaar ah loo leeyahay maxaa ka dhasha, qofkee waxaa sida gaar ka ah loo leeyahay baa adeegsan kara ama isticmaali kara, jawaabtu waa sahal waxaa isticmaali kara ama ka faa’iidaysan kara qofkii taajir ah ama lacag badan haysta, imisa ayaa ummada Soomaaliyeed maanta awooda inay iskuulo iyo cisbitaalo si gaar ah loo leeyahay caruurtooda u diri kara bal adba akhristow xisaabi oo jawaabta boqolkiiba inta kuu soo baxda ka feker.
Waxaan filayaa in dowladda arinkaan ay ka noqoto oo ay xooga saarto ahmiyaadka ummada sida waxbarashada, caafimaadka, dhaqaalaha, amniga iwm.
Waxaan rajeynayaa in ay madaxdu garowsato in waxbarasho la’aan iyo wasaarad la’aan aysan Soomaaliya laysugu dari Karin. Wasaaradu waxay qaban lahayd inay diyaariso manhaj midaysan, inay siyaasad guud u dejiso waxbarashada heer iskuul hoose ilaa heer jaamacad sare, in wasaaradu ay howlgeliso waxbarasho gaarsiisan miyo iyo magaalo dhamaan dalka Soomaaliya oo dhan, in wasaaradu ay dejiso qorshe abaabulan oo dhamaan Soomaaliya oo dhan qofkasta lagu gaarsiinayo inuu noqdo qof wax qori kara wax akhrin kara ugu yaraan, lana dagaalanto jahliga na dhigay meesha aan hada joogno.
Wasaarada caafimaadka sidoo kale waxay qaban lahayd inay dejiso nidaam caafimaad oo u cuntama ummadda Soomaaliyeed gaarsiiyana inay dadkoo dhan helaan adeeg caafimaad oo baahsan, hadii adeegyo caafimaad oo khaas loo leeyahay jiraana wasaaradu waxay xooga saari lahayd in shuruuc iyo dabagal lagu sameeyo dhamaan adeegyada caafimaad ee dalka gudahiisa laga hergeliyo si loo hubiyo in aan dadka masaakiinta ah waxyeelo loo gaysan.
Maalin dhoweyd ayaan arkayey warbaahin ka hadlaysa shirkaddo Hindiya ka fuliyey inay daawooyin ku tijaabiyaan dad badan oo Hindi ah iyaga oo isticmaalaya cisbitaalo si khaas ah loo leeyahay taas oo dhalisay in dad badan oo Hindi ah ay u dhintaan markii daawooyin khaldan la siiyey oo aan sharciga la marin lana hubin waxtarkooda iyo waxyeeladooda. Maxaa ka filaysaa dalka Soomaaliya maanta iyo beriba in laga fulin karo hadiiba dowladdi dhamayd ee dadku u hanweynaa ay leedahay wasaarad khaas ah oo caafimaad ma jirto. Dalka Hindiya wasaarad caafimaad oo weyn oo baaxad leh buu leeyahay hadana dad badan oo dadkooda ka mid ah ayaa daawooyin lagu tijaabiyey waxna lagu yeelay balse nasiib wanaag markii dowladdii ka warheshay waxay qaadeen talaabooyin lagu xakamanaynayo arimahaas laguna joojinayo shirkadihii daawada ku tijaabiyey dadka sharcigana la horkeenayo .
Waxaa lama huraan ah in dadka Soomaaliyeed ay isdaahilaan inay helaan waxbarasho iyo caafimaad tayo leh, lamana heli karo labadaas muhiimka u ah jiritaanka ummada iyadoo aan lahayn siyaasad dowladeed oo hagta majaraha lehna wasaarado dhamaystiran oo ka shaqeeya waxqabadka labadaas shey ee muhiimka ah ummada iyo dalkaba.
WQ. Siyaad Cali Yuusuf